Hawsha - Delta Injineer Belgium
Kaydso qeybta "Habka"
Talaado, 23 Juun 2020 by Sara
Xog aruuriyaha firfircoon
Aruuriyahayaga Xogta Dynamic ururiyaha waa kumbiyuutar kumbuyuutar ah oo ururiya dhammaan xogta laga helo qadka wax taaj oo kale. Waxay bilaabi kartaa / joojin kartaa mashiinada, waxay cabbiri kartaa isticmaalka tamarta, waxtarka khadka, iyo waxyaabo kaloo badan si loo hagaajiyo waxtarkaaga. Waxay ka dhigeysaa xogta laga heli karo SQL, MYSQL, iwm. Ee soo gudbinta.
Published in Hab-
Tag: hufnaanta khadka
Codsi Xog uruurineed ee firfircoon
Codsigan Xog uruurinta ee Xog uruurinta ah wuxuu ka qaadaa xogta xog aruuriyayaasha Xogta D Dhaqannada kala duwan ee ku yaal khadadka. Kadib, waxay kaydisaa oo keydisaa xogta muddo kadib. Xogta ku saabsan kontoroolka xariiqda waxaa ka mid ah cabbiraadaha waxtarka khadka, isticmaalka tamarta, iwm
Mashiinka uumiga uumiga ah wuxuu ka soo saaraa qoyaan hawada hawada deegaankaaga wax soo saarka. Waxay u isticmaashaa biyo wasakh leh si ay u qaboojiso hawada, yareynta dhibicda sayaxa. Tani waxay ka hor tagaysaa uumiga inay wasakhda / makiinadahaaga.
Khadka ilaaliyayaasha ayaa u oggolaanaya kormeerka xuduudaha & hawlgalka mashiinnada & khadadka wax soo saarka. Waxay xakamaysaa qulqulka dhalooyinka, kala-guurka… Waxqabadka khadka sare!